မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ငွေဆောင်ကမ်းခြေကို လေ့လာရေးခရီးသွားဦးမယ်ဗျို
ဒီပုံလေးက အရင်သုံးနှစ်က ငွေဆောင်ကို သွားတုန်းက ရိုက်ထားတာ။ ဗမာအမျိုးသမီးမြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ဥက္ကဌရာထူးကို အလကားမူးတင်းမတ်တင်းရစေခဲ့တဲ့ ပုံပါ။(ဘလော့တိုင်းမ်မှာတုန်းကပေါ့ ) ချစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ်။ ဒီပုံလေးက အသက်ဝင်တယ်တဲ့။ ဒါပေသိ ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ အဲဒီပုံက မြင်းပေါ်က ပြုတ်မကျခင်ရိုက်ထားလို့။ မဟုတ်ရင် အသက်ဝင်တယ် အစား အသက်မထွက်ခင်ပုံဖြစ်မယ်။ ဖြစ်ပုံက နတ်သမီးကျွန်း(သို့) ချစ်သူများကျွန်းကိုအသွား သဲလမ်းလေးက ရေတွေဖုံးနေတော့ မြင်းက ကြောက်ပြီး ပတတ်ရပ်လို့ ခါချသလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကလဲ ပဲများပြီး သတိလက်လွတ်ဖြစ်လို့ လိမ့်ကျပါလေရော။ အီးဟီး မြီးညှောက်ရိုးနာပီး တော်တော် အီစိမ့်သွားတာပဲ။ တော်ပါသေးရဲ့ မြင်းနင်းတာမခံလိုက်ရပဲ ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်ကလဲ ခဏပဲခံလိုက်ရတာမလို့။ ဒီတပါတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၂ရက်လဲ ငွေဆောင်ကို လေ့လာရေး ခရီးသွားရဦးမယ်ဗျို။အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တချို့ကို inspection လုပ်၊ အလကားရတာတွေ (brochure) အကုန်ယူလာ။ခရီးစဉ်က ဒီအတိုင်းလေးတဲ့။ (ယင်းဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်လိုက်တော့နော် :P)Venue: Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung BeachItinerary & Programme:Saturday, 20th October 20076am Departure from Yangon at6am from Espace Avenir by Coach3 pm Inspection of Hotels in Ngwe Saung Beach Sunday, 21st October 200710 am Registration10:30 am Opening Remarks10:45 am Presentation by MMC - EXCOM11:30 am Discussion on Development of Ngwe Saung Beach Destination12 Noon Lunch hosted by Myanmar Treasure Resort1:30 pm Departure from Ngwe Saungကောင်းတယ်နော် ဟီဟိ။ ဒီတခါတော့ မြင်းစီးတော့ဘူး။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေက လူကြီးတွေလဲ ပါမှာဆိုတော့လဲ အလိမ္မာလေးနဲ့ နေရဦးမယ်လေနော်။ဒါနဲ့ စကားမစပ် အတင်းပြောဦးမယ်။တချို့က ချောင်းသာသွားတော့ ပိုက်ပိုက်ချေးပြီး ထမင်းစားလာရတာ(ဖဲရှုံးလို့တဲ့ ) ပြီးတော့ ကမ်းခြေမှာ ဘီကီနီနဲ့ ကောင်မလေးတွေကြည့်ပြီး သဲတွေစားပြီး ပြန်လာတာ။ နားကားကားနဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ၀က်ချမ်းတက်စ်တို့ ဆိုရင် ချောင်းသာသွားတုန်းက အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။တို့ ကတော့ အေးဆေးပါ။ တနင်္လာနေ့ ပြန်လာမှ အတွေ့အကြုံတွေ ပြောဦးမယ်။ခုတော့ ဘလော့ဂ် ဗကေးရှင်း ယူပီဗျို။
Hi Melody,Going to Ngwe Saung Beach? Haveagood time !I originally planned to visit Ngwe Saung Beach and the Golden Rock the next time I come to Myanmar. But I guess it won't be soon (personal safety needs asatour visitor come first)... let me wait another year and see how things go first.:)
Hi Alvin,I returned back from Ngwe Saung.The authorities had announced that the curfew restrictions imposed in Yangon and Mandalay has been lifted effective 20-10-07 (Saturday).This is the result of improved security situation in both cities and the return to normalcy in the whole country.So, I want to invite you to visit this year.Hope you can help Myanmar people by visiting Myanmar and coming to see the truth.